Boky ho an’ny tanora: manana solontena ho any La Réunion isika | NewsMada
Boky ho an’ny tanora: manana solontena ho any La Réunion isika
Hotanterahina, ny 4 hatramin’ny 7 oktobra izao, any Saint Leu (La Réunion), ny andiany fahavalo amin’ny “Salon du livre de la jeunesse de l’océan Indien” na fanehoana amin’ny ranty sy ny hetsika samihafa ny tontolon’ny boky ho an’ny tanora aty amin’ny ranomasimbe Indianina.
Araka izany, voakasik’ity hetsika ity ny tanora malagasy sy ny famakiany boky na koa ny fahafahany mamoaka ny talentany eo amin’ny tontolon’ny asa soratra. Eo amin’izay fanoratana izany indrindra, manana tanora manan-talenta sy azo lazaina ho tsy zovina amin’ny mpankafy boky isika Malagasy.
Anisan’izany i Catmouse James, efa hita matetika amin’ireo hetsika samihafa momba ny tantara an-tsary na “bande dessinée” sady mpanoratra. Eo koa Rajaobelina Liva, mpanao BD sady mpaneho an-tsary. Samy handray anjara amin’ity “salon” ity izy ireo, izany hoe, ho solontenan’ny tanora malagasy manan-talenta amin’ny fanoratana sy ny sary.
Tanjon’ny hetsika ny hanatsara ny fahafahan’ny mpamaky, indrindra ny tanora, ireo boky sahaza azy. Eo koa ny fanentanana ny tanora hanana fahaiza-mamorona sy saina tia karokaroka. Miisa 70 ireo mpanoratra sy maneho an-tsary handray anjara amin’ny “Salon du livre de la jeunesse de l’océan Indien”. Avy eto Madagasikara sy avy any Mayotte, avy any Maorisy, avy any La Réunion ary avy any Frantsa izy ireo.
Hisy ny fihaonan’ny mpitsidika ny hetsika amin’ireo mpanoratra. Eo koa ny atrikasa samihafa momba ny “calligraphie”, fanehoana an-tsary, ny fomba fanoratana, atrikasa momba ny fandokoana sy fikirakirana taratasy hamoahana zavakanto, sns. Ankoatra ireo, hampisongadina ny hetsika ny fanolorana loka ho an’ny boky mendrika sy be mpankafy indrindra avy amin’ireo mpandray anjara.